ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုယူအေအီးတွင်နိုင်ငံတကာအလုပ်ရှာဖွေရေး to မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကို Group မှ🌟🌟🌟🌟🌟
အောက်တိုဘာလ 4, 2017
အောက်တိုဘာလ 14, 2017
ဟိုတယ်ယူအေအီးမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘယ်လိုရှာရမလဲ။ The ဟိုတယ်အလုပ် Dubai သူတို့နှင့်အလုပ်ရရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းဟိုတယ်အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစက်မှုလုပ်ငန်း။ အဖြစ်မှန်မှာတော့, သင်သည်ဤအလုပ် site ကိုရောက်လေ၏။ ထိုအသင်သည်တတ်နိုင် အကြံဉာဏ်ကိုဖဲ့အနည်းငယ် bits သည်မျှော်လင့်ထား။ သငျသညျကိုဆက်လက်ခင်မှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဘယ်လောက်အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်မှာကြည့်။ အဘယ်သို့ဒူဘိုင်းကိုအုပ်စိုးသောမင်းကိစ္စများအလုပ်အကိုင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လစာအပေါ်အမိန့်။ ဥပမာ ပြည်ပမှာနေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လို ဟိုတယ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်စားပွဲထိုးသို့မဟုတ်ဟိုတယ်မန်နေဂျာအဖြစ်။
ဒူဘိုင်းမြို့, သင်တန်း, များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည် MBA ဘွဲ့နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အရှာဖွေနေ။ နေ့တိုင်း 25k ကျော်ရှိပါတယ် HR ဟိုတယ်မန်နေဂျာထံသို့စေလွှတ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်။ ဒါကြောင့်ကိတ်မုန့်တဖဲ့ကိုရခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်ညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌သင်တို့၏အိပ်မက်အလုပ်ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ပင်ဟိုတယ်အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဘို့, သငျသညျအလုပျလုပျဖို့ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ် ဘယ်လိုတစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ တစ်ဦးသင့်လျော်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဟိုတယ်ကိုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အသစ်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏လက်၌အသေးစိတျအများကြီးရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဓိကအရာဖြစ်ပါသည် ဘယ်မှာလျှောက်ထားရန်သိရန်.
သင်တို့သည်လည်းအခြားအပြည်တော်ပြန်နှင့်အတူချိတ်ဆက်သငျ့သညျ။ သငျသညျအခွားသူမြားနှငျ့သငျ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ WhatsApp ကိုအုပ်စုအပေါ်ပြည်တော်ပြန်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ နှင့်သင့်အချက်အလက်များကို share ။ မြေတပြင်လုံးအရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေရှာဖွေစုဆောင်းအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။ အဘယ်သူသည်လက်ရှိတွင်ပို့စ်တင်ဖြစ်ပါတယ် ဟိုတယ် orientated အခွင့်အလမ်းများကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း?
ဒါကြောင့်သင်ကယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေသူဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်စကားပြောခြင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်နေရာချခံရဖို့ရှာဖွေနေ။ အဆိုပါဧညျ့ဈေးကွက်၌ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နေသည်။ လုပ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်လာသည်ဘယ်တော့မှမ။ အထူးသဖြင့် သငျသညျပြည်ပမှာအနေဖြင့် အကယ်. ဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့။ သင်သည်များစွာသောတာဝန်များတက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင်ပင်ဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးအဘို့ကိုဖိတ်ကြားဖြစ်လာခင်မှာ။ ဒူဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အလုပ်အကိုင်အ start ဖို့အကောင်းဆုံးသောနေရာများ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများရှိ။
ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများမှာ ပြည်တော်ပြန်ရန်အမြဲဖွင့်ထား။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကြည့်ရှိသည်နှင့်ရန်ကြိုးစား သင့်ရဲ့အိပ်မက်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ရှာဖွေရေး။ ဒူဘိုင်းအတွက်တကယ်တော့ 5-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်ကိစ္စအဖြစ်။ အစဉ်အမြဲပိုလတ်ဆတ်ဖွင့်ဖြစ်လာရသည်။ အဘယ်သူမျှမအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလူတွေတောင်မှဒူဘိုင်းဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်အလုပ်အကိုင်များအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အတူတူဟိုတယ်နှင့်အတူ ပိုလတ်ဆတ်အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ အားလုံးအံ့သြဖွယ်ဒူဘိုင်း၌ပြစ်မှားမိစေနိုင်သည်။
ဒါဟာဘယ်လောက်ကောင်းအကြောင်းကိုကောလဟာလဖြစ်ပါတယ် အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုရင်။ သင် ... သင့်တယ် ယူအေအီးအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ငါတို့သိသလောက်ကတော့အိန္ဒိယ Expatriate တွေဟာအကြီးတန်းတစ်ယောက်အနေနဲ့အလုပ်အလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်တယ် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့မန်နေဂျာ။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်သည်အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီများအတွက်လျှောက်ထားသင့်သည်။ သင်ပင်မြင်နိုင်ပါတယ် ဘယ်လောက်ကဒီကုမ္ပဏီကိုစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူကိုသင်ထားရှိခံရဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သင့်သည်။
ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Resorts ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး Find ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
ဟော်တယ် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ဂျော့ဘ်။ အလေးပေးရန် ရာထူး in ယူအေအီး 2001 ကတည်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကဧညျ့စျေးကွက်အတွက်ယခုစုဆောင်း။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ကျနော်တို့ဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖန်တီး ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်စုဆောင်းမှုဝန်ဆောင်မှု။ ထို့အပွငျတူညီဒီစံဖို့ စုဆောင်းမှု ခေါင်းစဉ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမြင့်မားများအတွက် rated ဖြစ်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်ဂျော့ဘ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူကူညီပေးနေကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်စနစ်က ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ယူအေအီးနှင့်နေရာချခံရဖို့။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့တကယ်တော့စဉ်းစားမိတယ်။ မည်သို့၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သင်ကူညီပေးရန် အလုပ်ရှာဖွေနေ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ တစ်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုနေရာချနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ရှာဖွေသူ ယူအေအီး၌တည်၏။
ကျနော်တို့ကရှင်းလင်းဖို့ရှိသည် ပင်တစ်ကျွမ်းကျင်သူများမိန်းမသည်အနည်းငယ်အကြံပြုချက်များ သင်သိပါလိမ့်မယ်သေချာဖြစ် အလုပ်တစ်ခုဆင်းသက်ဖို့ဘယ်လို သိသာထင်ရှားတဲ့။ အသစ်ကမှနိဂုံးချုပ်အတွက်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အခြမ်းတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ ဘို့ ယူအေအီးအတွက်ဂျော့ဘ်။ နေသောမကြာခဏအများဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနေ in ဒူဘိုင်း/ယူအေအီး။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအခုသူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးနိုငျ အလုပ်ရှာဖွေနေန်ဆောင်မှုများ။ ထိုအနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလိုသူတို့လိမ့်မည် တစ်ဦးကိုရှာဖွေ ကူဝိတ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အအိပ်မက်မက်.
ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးရှာဖွေခြင်း. ဒူဘိုင်းအတွက်ခရီးသွားဧည့်အဖြစ်အားလပ်ရက်ကာလအတွင်း။ သင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်လျှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ အိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တူရေခြားမြေခြားတိုင်းပြည်များအနေဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ရည်ရွယ်သူမြား ယူအေအီးဒေသတွင်း၌အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့။ သင်တို့အဘို့ရှာဖွေနေချိန်မှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ သို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ။ သို့မဟုတ်ပင် မြေတပြင်လုံးဥရောပနှင့်ပိုလန်အတွက်အလုပ် နှင့်သင်တန်း၏ GCC ။
ကျနော်တို့ WhatsApp ကိုအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ရန်သင့်အားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်များပေးထားမျှဖို့ချဉ်းကပ်မှု '' တဦးတည်းရဲ့အရွယ်အစားအားလုံးကိုက်ညီ '' လည်းမရှိ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်။ ဒီလက်ငင်းမှာကြောင်းအရာများစွာကိုနေဆဲရှိပါတယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများ လုပ်နိုင်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အိပ်မက်ယောဘသည်များအတွက်ပြည်သည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီဒီမှာပါ။ သင်တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်ပရှိရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ ထိုမှတပါးဧညျ့ကဏ္ဍထဲမှာထည့်ထားခံရဖို့ရှာဖွေနေ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဤနေရာတွင်သင်ကပင်ကိုလန်ဘိုနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အရကူညီရန်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးကျွမ်းကျင်သူများယူပြီးဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းဖို့ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးအဘို့ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီအတွက် Careerjet နှင့် ယူအေအီးအတွက် Monster ပင်လယ်ကွေ့ကုမ္ပဏီ။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ဒူဘိုင်းဟိုတယ်အလုပ်ရှာဖွေရေး it ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် သင်၌သင်တို့ပတ်လည်အခြိနျမှနျမှလူများတစ်ဦးဥစ္စာဓနကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ် Burj Al- အာရပ်။ ကောင်းသောလုပ်ခနဲ့တွဲပြီးနှင့်ထဲမှာ ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံဥာဏ်စင်တာ။ သူတို့အနေဖြင့်လည်းရရှိနိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ အဘယ်သူသည်ကိုရှာဖွေရန်လုံလောက်သောကံကောင်းများအတွက်ကျော်လွန်ခဲ့သနညျး အဆိုပါ အလုပ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဟိုတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ။
ဒါ့အပြင်ဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကဏ္ဍတွင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်။ သငျသညျအလုံအလောက်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျလျှောက်ထားကြသည်အခါတိုင်း ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်ဘို့။ သင်အတှေ့အကွုံကိုသုံးပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်သိထားရန်လိုအပ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်မည်သို့။ ဒါကြောင့်ခဏယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မှာကြည့်ကျေးဇူးပြုပြီး ဒူဘိုင်းလမ်းများအကြောင်းကိုဆောင်းပါး။ ထိုအခါအတောအတွင်း၌အကြှနျုပျတို့၏အကြံပေးချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုကြည့်ပါရန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဘယ်အရပ်မှစကားပြော ယူအေအီးအတွက်ဟိုတယ်အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
ယူအေအီးအတွက်ဟိုတယ်အလုပ်ရှာဖွေရေး - ထိပ်တန်း 10 နေရာများအလုပ်ရှာဖွေရေးဘို့ Apply မှ
Hozpitality - ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိသငျသညျစတငျနိုငျ ရှာဖွေနေ သင်၏နောက်များအတွက် ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး in အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး) အလုပ် ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းမှတဆင့်။
Catererglobal.com ထိပ်၏ထိုအတောအတွင်းတဦးတည်းအတွက် ဟိုတယ်ဂျော့ဒူဘိုင်း in အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု Portal ကို
Jumeirah Group မှ ပထမဦးဆုံးဌာန၌ ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်။ အတူစတင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု in ဒူဘိုင်းစီးတီး - Jumeirah အံ့သြဖွယ် ဟော်တယ်
address ကိုဟိုတယ် လိပ်စာမှာနောက်ဆုံးတွင် Careers ဟိုတယ်နှင့် Resorts - သင်သည်သင်၏ပေးပို့နိုင်ပါတယ် မွန်ဘိုင်းမှပြန်လည်စတင်.
Armani ဟိုတယ်ဒူဘိုင်း - Apply သင့်ရဲ့နဲ့အတူ ပြန်စသည် စတင်ရန် အလုပ်အကိုင်များ in Armani ဟိုတယ်ဒူဘိုင်း။
Roda ဟိုတယ် ဒူဘိုင်း - ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း Careers, အံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ ယူအေအီးအတွက် Roda ဟိုတယ် - အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခွင့်အလမ်းများနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အတွေ့အကြုံကထားရန်စွမ်းရည်။
ထောင်စုနှစ်ဟိုတယ်နှင့် Resorts - အလုပ်အကိုင်များ သူတို့နှင့်အတူသငျသညျပွုပါရန်ရှိသည်အားလုံးသာဖြစ်ပါတယ် ဖြည့် ယင်းအထဲက ပုံသဏ္ဌာန် သငျတို့သထောင်စုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ဟိုတယ် နှင့် အပန်းဖြေစခန်း။
Vision ၏ဟိုတယ် ရရှိနိုင် Explore ဧညျ့ဝတျကပြွှေနျခွငျး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အဘူဒါဘီအတွက်ဆုရအသင်းနှင့်အတူ။
Rotana မှာအလုပ်အကိုင်များ - Rotanacareers.com ဧညျ့ဝတျကပြွှေနျခွငျး အဆိုပါအတွင်းအမှတ်တံဆိပ် GCC အလုပ်လုပ်မှဒေသ, အလွန်ကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီနှင့်ထိပ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Fairmont အလုပ်အကိုင်များ။
အဘယ်မှာရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းနှင့်ထူးခြားသောမြှင့်တင်ရေးတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဤ ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် WhatsApp ကိုအုပျစု တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကမ်းလှမ်း ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့ပေး ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အခွင့်အလမ်း။ သူတို့ကိုရဖို့ကူညီပေးခြင်း အလယ်မှာအရှေ့အတွေ့အကြုံ။ ထိုအဘို့အဆုလာဘ် ကမ္ဘာတဝှမ်းန်ထမ်း.
ဒူဘိုင်းမြို့ 13,300 ဟိုတယ်အခန်းပေါင်းထက်ပိုရှိပါတယ်
Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers ဟိုတယ်ဂျော့ဒူဘိုင်း
အတူ LinkedIn အပေါ်ချိတ်ဆက်ပါ - Bastian Kiendl - လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် ညှိနှိုင်းရေးမှူး Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်အင်တာနေရှင်နယ်မှာ
Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်အင်တာနေရှင်နယ် အလုပ်အကိုင်များ ဟိုတယ်ဂျော့ဘ် တခဏအတွက် Apply ရရှိနိုင် Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်များအတွက် နိုင်ငံတကာဟိုတယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဒူဘိုင်း အွန်လိုင်း။ start ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေး နောက်ဆုံးမှာအတွက် နိုင်ငံတကာဟိုတယ်။ foreground ကကြိုဆိုဧည့်သည်များအတွက်, နေ့-to-နေ့ကစစ်ဆင်ရေး၏ထိန်းသိမ်းရန် Mariott အင်တာနေရှင်နယ်.
Marriot အဖွဲ့မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာဟာသူတို့ရဲ့န်ထမ်းလမ်းညွှန်သင်ပြနှစ်သက်တော်မူ၏။ အဆိုပါ Marriot အသင်းနှင့်အတူမည်သည့်အဖြစ်အပျက်၌, သငျသညျတာဝန်နှင့်တာဝန်များကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အဖြေ ဒူဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေ။ အဆိုပါဧညျ့လုပ်ငန်းစျေးကွက်အတွက်နိဂုံးချုပ်အတွက်လုံလောက်အောင်စမတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးနှင့်အတူတက်လာရန်ရှိသည် အလုပ်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်း.
နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခက်ခဲတဲ့အခြေအနေများကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကြိုးစနစ်။ ဒီနေရာတွင်သူသည်ပြီးခဲ့သည့်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်ပြီ အိန္ဒိယကနေဒူဘိုင်းမှစုဆောင်း။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း website တွင်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
IHG ကို Global Careers 100% အမှန်ဆိုသည်ကား, International Business
ဒီလက်ငင်းမှာအတူ LinkedIn အပေါ် connect Louise Byrne - ဒုတိယသမ္မတ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Talent: at Intercontinental ဟိုတယ်အုပ်စု
IHG ကမ္တာ့ အလုပ်အကိုင်များ - ဤအချက်များအား။ အဆိုပါအလုပ်ရှာဖွေသူလို ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများသည်တဦးအဘို့အလုပ်ရှာ ဒူဘိုင်း၌တည်၏။ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေအတွက်နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်IHG®သည်တဦးဖြစ်ပါသည် ကမ္တာ့ သိသိသာသာကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ဟိုတယ်ကုမ္ပဏီ ထိပ်တန်း 10 ဟိုတယ် ရာထူး ဥရောပမှာ နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံဥရောပယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်သင်တန်း၏အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှာ။ ဒီကုမ္ပဏီကိုသင်ပေးနိုငျသောအရာကိုစစျဆေးဖို့ကျိုးနပ်သည်။
IHG တစ်ဦးက G ဖြစ်ပါသည်lobal ဟိုတယ်အလုပ်ရှာဖွေရေးပေးသူ
နောက်ဆုံးတော့, IHG တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဟိုတယ် သငျသညျသစ်တစ်ခုစတင်နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာကုမ္ပဏီ ရာထူး။ ၏ကျယ်ပြန့်အစုစုနှင့်အတူဖြစ်သော်လည်း ဟိုတယ်အမှတ်တံဆိပ်နီးပါး 100 နိုင်ငံတွေထဲမှာရှိတဲ့အလုပ်ရရန်လွယ်ကူသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒီကုမ္ပဏီအဓိပ်ပာယျ စော်ဘွား၌သင်တို့အဘို့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်း၏လောကဓာတ်။ သူတို့ဟာလူမျိုး၏ဝန်ထမ်းအညီအမျှထောင်ပေါင်းများစွာ ကမ္ဘာတဝှမ်း။ အဖြစ် IHG အသင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၌နေသောသူအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိ။ ဒီကုမ္ပဏီကိုလုပ်ကြောင်းစိတ်ကူးများ, လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အားထုတ်မှုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် IHG ထိပ်တန်းအလုပ်ပံ့ပိုးပေး။ သူတို့ဟာသောဖောက်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးချင်းစီအထဲကထောက်ပြဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ ဒီတော့သင်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် တစ်နေရာရာမှာအပြုသဘောဘက်မှာ ဘယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးကြိုးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပူဇော်သူတို့ IHG မှာသငျသညျကိုကူညီပေးပါတယ်။
HRC အင်တာနေရှင်နယ် - အလုပ်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ရှာရန်
ဒီလက်ငင်း Connect ကိုမှာ LinkedIn အပေါ်နှင့်အတူ ဖရန့် Elzinga - အထွေထွေမန်နေဂျာအာရှမှာ HRC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ: အလုပ်အမှုဆောင်ရှာရန် နှင့် ်ထမ်းခေါ်ယူမှု အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှု။
အတူကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး Programs ကို HRC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, တိုင်း အလုပ်ရှာဖွေသူ အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော HRC တစ်ဦးဦးဆောင်ဟိုတယ်ကျောင်းသို့မဟုတ်အချက်အပြုတ်အနုပညာမှကျောင်းသားများသို့မဟုတ်ဘွဲ့ရ။ တကယ်တော့လောလောလတ်လတ်အကယ်ဒမီကနေဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ N ကိုow နိုင်ပါတယ် လျှောက်ထား တစ်ဘို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း. သင်ပင်ဘဝ-ပြောင်းလဲစတင်နိုင်ပါသည် စီမံခန့်ခွဲမှု လေ့ကျင့်ရေး or အလုပ်သင်။ ကျိန်းသေ, သင်ပိုင်ခွင့်အရပျ၌အလုပ်ရှိသည်ရန်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ ဒူဘိုင်းအတွက်ဖိလစ်ပိုင်အလုပ်ရှာဖွေသူများငှားရမ်း.
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန် HRC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဦးစားပေးစုဆောင်းမိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရာပေါင်းများစွာများအတွက် ထူးချွန်ဇိမ်ခံ ထဲမှာအများဆုံးအလုပ်များမြို့ကြီးများရှိဟိုတယ်များ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု။ အခြားအဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ အံ့သြဖွယ်နေရာများ။ ကဲ့သို့ အာရှတိုက်, ကေနဒါ, ၾသစေတးလ် နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း။ ဆက်ဆက်, သင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရနိုင် ကမ္ဘာတဝှမ်း။ အားလုံးအားဖြင့်သင်တို့ကိုတစ်ဦး Arabic အဘိဓါန်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရှာနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောအချက်သင်သည်တတ်နိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့။ ဒီတော့နှောင်းပိုင်းကဖြစ်ပါဘူး။ နှင့်သင့် updated CV ကို upload လုပ်။
ဟီလ်တန် Careers ကမ္ဘာ့ 25 အကောင်းဆုံးနိုင်ငံစုံအခြေစိုက်အလုပ်ခွင်
ဒီလက်ငင်း Connect ကိုမှာ LinkedIn အပေါ်နှင့်အတူ Carlo Martinelli က HR Manager at Hilton Worldwide ၏ ဟိုတယ်ဂျော့ဒူဘိုင်းဟီလ်တန် - လန်ဒန်စီးတီးဘို့အတွက်
Hilton Worldwide ၏အဘို့ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအဘို့ဖြစ်၏ ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ, ဒူဘိုင်းဟီလ်တန်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ခြွင်းချက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အညီအမျှအရေးကြီးပါတယ်။ ဟီလ်တန်ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဒူဘိုင်း အစဉ်အမြဲရှာဖွေနေ။ သာ ကမ္ဘာအဝှမ်းမှခြွင်းချက်ကလူ။ ရှာဖွေနေအဖွဲ့အစည်း ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကလုပ်သားများ။ ဒီကြီးမားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအခြားတစ်ဖက်တွင်။ ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းသင်တို့အဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အမေရိကန်, ကနေဒါ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, သြစတြေးလျနှင့်ဥရောပသည်။
အားလုံးအထက်ဟိုတယ်ရဲ့ဟီလ်တန်ဒါ့အပြင်, ဆယ်စီမံခန့်ခွဲ ကမ္ဘာ့အများစုမှာ လူကြိုက်များ အမှတ်တံဆိပ်။ 5,200 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများထက်ပိုမိုဖော်ပြခြင်းမ။ ဟိုတယ်ဂျော့ဒူဘိုင်းဟီလ်တန် သူတို့ 159,000 အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များထက်ပိုရှိသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ။ အထူးသဖြင့်ဟီလ်တန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥရောပ, အမေရိကန်, အာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကော်ပိုရိတ်ရုံးများပိုင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲ။
တကယ်တော့သေသောသူတို့ကိုကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ဧည့်ဝတ်ပြုကုမ္ပဏီစေသည်။ ဟီလ်တန်တို့သည်ကြီးစွာသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်သျောလညျးသငျဖို့လိုအပျ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အစတင်ရန်။ ဟီလ်တန်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရတဲ့ဟာအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ကလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်လည်းကြိုးစားနေစောင့်ရှောက်လော့။
Hyatt Jobs အလုပ်ရှာဖွေရေးသည် Hyatt Join
ဒီလက်ငင်း Connect ကိုမှာ LinkedIn အပေါ်နှင့်အတူ Doug ပက်ထရစ် အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ - လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်
ရာထူး အမှန်စင်စစ်ဟိုတယ်ဂျော့ဒူဘိုင်းနှင့်အတူလမ်းကြောင်း Hyatt ဖြစ်ပါသည် အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာ.
ယေဘုယျအားဖြင့် Hyatt စကားပြော အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှကျူးလွန်ထားပြီး။ လည်းအမေရိကန်ဟိုတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ သူတို့ရဲ့တိုးတက်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနည်းငယ်မှတ်ချက်ပြုထားသည်အဖြစ် အလုပ်အကိုင်များ နှင့် Hyatt။ Hyatt မှာတခြားကနေကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အကိုင်များဖြစ်ပါသည် ဟိုတယ်ကုမ္ပဏီများ သူတို့နေဆဲရိုးရာလမ်းကြောင်းသည်အောက်ပါလို့ပဲ။ Hyatt မှာဆန့်ကျင်တွင်သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့ထို့ပြင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပြီးသင်ကချစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်အဆင်ပြေအောင်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ Hyatt တစ်ဦးချင်းစီအခြေအနေများအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ နှင့်ဦးစားပေးနိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများနေရာ.
နေစဉ်တွင်သင်တို့ကို အိန္ဒိယအဖြစ်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ။ သင်၏လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသရုပ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျ Hyatt အင်တာနေရှင်နယ်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအထူးသဖြင့်အခါ။ သင်သည်သင်၏စတင်နိုင်ပါသည် တစ်ဦးစားနပ်ရိက္ခာနှင့် Beverage အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သို့မဟုတ်အခန်းများအဖွဲ့။ ၏ကိုစတင်မှာ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အခြေခံလူနေမှုပုံစံစတဲ့ start။ ထောက်ပြဖို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများ တစ်ဘို့ Hyatt မှာ ရာထူး အမှန်တကယ်န့်အသတ်ရှိပါတယ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သင်သည်သင်၏တွန်းနိုင်ပါတယ် စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍသို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကို.
ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် လိုက်ရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အခြားလမ်းအတွက်။ သင့်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ရန် ရာထူး နောက်ဆုံးမှာတ Hyatt ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာသို့မဟုတ်လယ်ကွင်းသငျသညျကွိုးစားအားထုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာအတွက်ကြောင့်, နိုင်ငံတကာဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်း များသော အလုပ်ရှာဖွေသူများ သူတို့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်ပျက်ကွက်ပါပွီ။ မှနိဂုံးချုပ် အခွင့်အလမ်းသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် အလုပ် အခြားအခုနှစ် ယဉ်ကျေးမှု နှင့် နိုင်ငံပေါင်း။ သင်တို့သည်လည်းကြည့်ရှိသင့် Hyatt နှင့်အတူဆော်ဒီအာရေဗျအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ.
ဟိုတယ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Hyatt အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာကုမ္ပဏီ
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့သူတို့ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအစာရှောင်ခြင်းမပေါက်ပါဘူး။ ထို့အပွငျ 2009 Hyatt ရုံဟိုတယ်ဂုဏ်သတ္တိများထက်အများကြီးပိုအတွက်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံကတည်းက။ by နဲ့ကြီးမားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိကုမ္ပဏီကိုလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြလိမ့်မည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ WhatsApp ကိုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း။ Whatsapp ယခုငွေပေးချေမှု option ကိုစမ်းသပ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, သူတို့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်စတင်ရန် သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းသူတွေကို အသင်းအဖွဲ့။ ဒါနဲ့ အခွင့်အလမ်း သင့်ရဲ့အတွင်းတိုးတက်မှုနှင့်အလွန်ကောင်းသောလမ်းများအတွက်တကယ်တော့ ရာထူး Hyatt နှင့်အတူန့်အသတ်ရှိပါတယ် !.
အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး4နိုင်ငံများနှင့် 42 ဟိုတယ်အတွက် RameeHotel
ဒီလက်ငင်း Connect ကိုမှာ LinkedIn အပေါ်နှင့်အတူ Laxmi T က. Ramee ဟိုတယ်မှာထမ်းခေါ်ယူမှု Manager ကို
ဂျော့ဘ် ဒူဘိုင်းအတွက် ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှု & Operations အတွက် အရှေ့အလယ်ပိုင်း။ Furthermore မှ Ramee ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲအနှစ်ချုပ်နှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ။ နိုင်ငံအများအပြားအတွက်ဟိုတယ်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း၏နေ့-to-နေ့ကစစ်ဆင်ရေး။ စုစုပေါင်းအိန္ဒိယ, ဘာရိန်း, အိုမန်နှင့်ယူအေအီး။ ထို့အပြင်ဖြစ်စေအမှု၌အရည်အချင်းပြည့်တဲ့ရေကူးကန်တို့ကကျောထောက်နောက်ခံ။ နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ။ ဤအချက်များ, Ramee ပေး အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်မှန်ထောက်ပံ့ ဧညျ့ဝတျကပြွှေနျခွငျး. နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, ရှိသည် ရုံထက်အများကြီးပိုပြီး ဟိုတယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျကျိန်းသေယုတ်သောအရာကိုအထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုန်ဆောင်မှုများ။ ဒါ့အပြင်သင်သည်လည်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပရှိ.
Ramee ဟိုတယ်သငျသညျဇိမ်ခံလောကီသားတို့သည်တစ်လျှောက်လုံးသွားစေပါလိမ့်မယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အမှန်တကယ်ပိုကြီးတဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုခံစားရ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာမိသားစု။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိဟိုတယ် & Resorts မစ်ရှင်၏ Ramee Group မှ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်4နိုင်ငံများရှိစစ်မှန်ဧညျ့ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုတယ်ဂျော့ဒူဘိုင်းအမှန်ပင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျကျိန်းသေနိုင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပြည်ပရှိအဖြစ်အလုပ်ရှာတွေ့။ အများစုကိစ္စများတွင်ပါကကောင်းစွာပေးဆောင်လိမ့်မည်။ ဒီတော့ Ramee ဟိုတယ်ဖြစ်နိုင်သည် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဘို့သင့်ပစ်မှတ်.
ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျဘဏ္ဍာရေးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှု နှင့်စစ်ဆင်ရေးလယ်ကွင်း။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလွန်လူကြိုက်များလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကုမ္ပဏီအတွင်း၌ထားရှိခံရဖို့ရှာဖွေနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုအနေအထားကိုဆုံးဖြတ်မီ။
သငျသညျလျှင်နောက်ထပ် key ကိုအမှတ် အကြီးတန်း USA တွင်အလုပ်အမှုဆောင်။ HRC အချိန်ပြည့်ကမ်းလှမ်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်း ဇိမ်ခံဟိုတယ်များမှာ ကမ္ဘာတစ်လွှား။ အထူးသဖြင့်ပေးဆောင်ရေတွင်းဖြစ်လာ ဝါရင့်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ။ HRC ထူးခြားတဲ့ကုမ္ပဏီစေသည်ကြောင့်အမှန်တကယ်စင်ကြယ်သောအရာကိုအသတိရဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန် ပံ့ပိုးပေးသူ. သူတို့စီမံခန့်ခွဲမှုတန်ဖိုးနဲ့အသစ်ကဖြစ်ပါတယ်ပြီအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား န်ထမ်း အထူးသဖြင့်စီမံခန့်ခွဲပေမယ့်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဖြစ် Co-operated မဟုတ်ပါဘူး။ ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတကာမိသားစုလိုပဲ။
အပြုသဘောဘက်တွင် စီမံခန့်ခွဲမှု HRC ၏ ကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးသွား။ အထူးသ, သူတို့အနာဂတ်တွေ့ဆုံရန်ကိုချစ် မတိုင်မီပေးသောအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုရင်ဆိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအမှုဆောင်အရာရှိကွန်ယက်ကိုမျက်နှာ။ သူတို့သွားလေရာရာ၌ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, HRC န်ထမ်းအောက်ပါအတိုင်း။ တကယ်တော့ကုမ္ပဏီမူဝါဒဟာပွဲစဉ်တစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်ဟု ကောင်းသောပွဲစဉ်။ အခါအနေဖြင့်အားလုံးပါတီများပျော်ရွှင်ထက်အများကြီးပိုပါတယ် အလုပ် အစီအစဉ်ကိုကြွလာ အတူတူ။ ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုတောင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဆက်လက်။ အထူးသဖြင့် HRC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပိုမိုထွက်ရှာတွေ့ ဒူဘိုင်းမြို့အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်ဟိုတယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် မှလွဲ. ။ သငျသညျအခြားစီမံကိန်းများတွင်အလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် Google ကဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုအိုင်တီရှိပါတယ် သငျသညျဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ရှာတှေ့နိုငျ။ ယူအေအီးအတွက်အများအပြားနေရာလွတ်ရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်သင့်ကြောင်း။ ဒါကြောင့်သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ဘလော့ဂ်မှာကြည့်ဖူး။ သငျသညျဒူဘိုင်းနီးပါးမည်သည့်အနေအထားများအတွက်အကြံဉာဏ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သငျသညျရှာတှေ့နိုငျသည်အခြားအလုပ်အကိုင်များတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက် Automotive စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ။ ဒါကကဏ္ဍဒူဘိုင်းအတွက်ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် Porshe သို့မဟုတ် Ferrari ပြိုင်ကားအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ လျှင်တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်သင်တို့ကိုအရောင်းအတှေ့အကွုံရှိခြင်းနေကြသည်။ သင့်အနေဖြင့်မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်အများအပြားကုမ္ပဏီများမှရန်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်သင်တို့အဘို့နောက်ထပ်ကောင်းသောလမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးအပေါ်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေတာ။ သငျသညျဒူဘိုင်းတချို့နေရာတွေကိုကျော်လမ်းလျှောက်လျှင်သင်အလုပ်ရနိုင်သည်။ ကိုယ့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအသေးစိတ်ကိုအွန်လိုင်းစစ်ဆေးပါ။ သင်မန်နေဂျာနှင့်အတူစကားပြောမတိုင်မီသိရန်လိုအပ်သည့်အရာအချို့က။ သင်လိုချင်သောအရာကိုသိရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်စဉ်လုပ်ဖို့ အပြောင်းအလဲနဲ့အင်တာဗျူး ကုမ္ပဏီအတွင်းမှသင့်ရဲ့အနာဂတ်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မန်နေဂျာသို့မဟုတ်လက်ရှိမန်နေဂျာနှင့်အတူ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်အများအပြားနေရာလွတ်ဘို့စုဆောင်း။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသင်သည်အစာရှောင်ခြင်းအောင်မြင်မှုရှာဖွေသင့်ရဲ့အလုပ်ရောက်ရှိရန်ကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကထိပ်တန်းရာထူး၌သင်တို့ကိုနေရာချဖို့ဖြစ်ပါတယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွင်း။ သငျသညျနေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုရှာနေလျှင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်း။ Dubai City Company သည်သင်၏အဖြေဖြစ်သင့်သည်။ ဒူဘိုင်းတွင်မိုဘိုင်းဖုန်းခေါ်ယူစုဆောင်းမှုကိုလည်းသင်အနည်းငယ်အာရုံစိုက်သင့်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစျေးကွက်ကတော်တော်လေးမြန်တယ်။ အထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ကဏ္inတွင်ဖြစ်သည်။
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မှ Now ကလူ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာနေ။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကိုသင်အများအပြားစျေးကွက်အတွင်းအချို့သောလှုပ်ရှားမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်တဲ့။ သို့သော်သင်သည်အပြုသဘောနှင့် smart လမ်းအတွက်လုပ်ရပေမည်။ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာတစ်လမ်းအမြဲရှိပါသည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။
သင့်ရဲ့အလုပ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှာဖွေနေနှင့်အတူနောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌တည်၏။ ဒါကြောင့်မျိုးဖြစ် ကျေးဇူးပြု. နှင့် ဝေစု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါ မှလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကတခြားအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီ တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ဒူဘိုင်းဖို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload။ ကျနော်တို့တိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ၏မာနထောင်လွှားခြင်းထက်ပိုပါတယ်။ အဘယ်သူသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်ရှာတွေ့လိမ့်မည်နည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်သည်ထိုသူတို့၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအချက်များပေးထားသောအခြားကူညီ ဒူဘိုင်းနှင့်ပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေ။ ဒါ့အပြင်အပေါ်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့, အခြားသူများ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီ LinkedIn တို့။ သူတို့ကဒူဘိုင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေရှိစေခြင်းငှါ !.
ခင်မှာကျွန်တော်ဤဆောင်းပါးကိုလက်စသတ်။ သင်အမြဲကတခြားနေရာလွတ်အဘို့သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် post ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ၌ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ပါရန်။ ယခုကြှနျုပျတို့များမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်း ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက် !.
သည်အခြားအများအပြားရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့နေရာလွတ်။ ထို့ပြင်သင်ကနေရာချနိုင်။ သင်တန်း, ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ start ဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းပါတယ်။ သို့သော်အစဉ်အမြဲရှေ့ကိုရွှေ့ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ သငျတို့သကျရှငျနစတငျနိုငျမဆိုအခွင့်အလမ်းဖမ်းပြီး တစ်ကယ့်ကို Arabic အဘိဓါန်လူနေမှုပုံစံစတဲ့. ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးပါ!
စော်ဘွားအတွက်ဟိုတယ်ယူအေအီးနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို ?. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူစကားပြောပါ။
ကောင်းပြီကျနော်တို့ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေးနေကြသည်အဖြစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အရှာဖွေနေစတင်နိုင်ပါသည်။